Fitsaram-bahoaka : Tarazon’ny 2002 sy 2009 -
AccueilRaharaham-pirenenaFitsaram-bahoaka : Tarazon’ny 2002 sy 2009
11/05/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
“Hazalambo”…! Noventesina sy nohobiana teny amin’ny kianjan’ny 13 Mey mihitsy izany fanaovana “hazalambo” ny amiraly Didier Ratsiraka sy ny governemanta Tantely Andrianarivo izany ny taona 2002. Nampirisihana sy nomena vahana hanao “hazalambo” ireo mpomba ny fitondrana Ratsiraka ny vahoaka, izany no fanabeazana nomen-dRavalomanana Marc ny Malagasy. Voaroba sy nodorana avokoa ny ankohonan’ireo mpomba ny fitondrana tamin’izany fotoana: Gerard Andriamilerovason (tale jeneralin’ny prezidansa), José Andrianoelison (mpanolotsaina manokana), Tsaranazy Jean Emile (ministry ny Asa vaventy), Guy Willy Razanamasy (ben’ny tanànan’Antananarivo teo aloha), sns. Norobaina ary natao “hazalambo” avokoa ireo olona rehetra voalaza anarana ireo tamin’izany ary nifaliana sy nihobiana teny amin’ny kianjan’ny 13 Mey mihitsy izany.
Tonga ny taona 2009, norobaina sy nodorana daholo indray koa ny tanàna sy ny trano fonenan’ireo mpomba an-dRavalomanana Marc araka ny baikon’i Andry Rajoelina, raha tsy hiresaka afa-tsy ny nanjo an’i Moxe Ramandimbilahatra sy Guy Rivo Randrianarisoa. Tsy nijanona fotsiny tamin’izany fa tonga hatramin’ny fandrobana ny Tiko sy ny Magro ary ireo tranombarotra aman-jatony nanerana ny Nosy. Andry Rajoelina mihitsy no nanome tso-drano ireo mpandroba tamin’izany izay voarakitra anaty horonantsary maro.
Nopotehan-dRavalomanana Marc sy Andry Rajoelina mihitsy ny toe-tsain’ny vahoaka koa tsy mahagaga raha mizaka ny vokatr’izany ny firenena ankehitriny. Tsy ny lafiny ara-toekarena sy sosialy ihany no rava vokatr’izany fanonganam-panjakana indroa nisesy nanomboka ny taona 2002 ireny fa indrindra ny toe-tsaina. Izy roalahy fototry ny afo indray anefa no toa miseho ho mpanome lesona sy mpanenjika ny fitondrana ankehitriny.